अमेरिकामा हिमआँधी कम्तीमा २३ को मृत्यु, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित – Koshidaily
मुख्य पृष्ठअन्तराष्ट्रियअमेरिकामा हिमआँधी कम्तीमा २३ को मृत्यु, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित
अमेरिकामा हिमआँधी कम्तीमा २३ को मृत्यु, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित
अमेरिकामा हिमआँधीले मच्चाएको वितण्डाका कारण कम्तीमा २३ जनाको मृत्यु भएको छ । जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।
हिमआँधीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएपछि टेक्सास राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ । अमेरिकाको मध्य तथा दक्षिणी राज्यमा हिमआँधीले ठूलो धनजनको क्षति गरेको हो । हिमआँधीपछि टेक्सास राज्यका लाखौं सर्वसाधारण विद्युत सेवाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । मंगलबार आएको आँधीले कोरोना खोप वितरणलाई पनि प्रभावित पारेको छ । यसको असर आइतबारसम्म रहने बताइएको छ ।
टेक्सास, लुसियाना, केन्टुकी र मिजौरीलगायत राज्यमा कम्तीमा २३ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । नर्थ क्यारोलाइना, ओरेगन राज्यमा पनि यसको असर परेको छ ।
बिजुली नभएपछि मानिसहरूले कोठा तताउन पाएका छैनन् । इन्टरनेटको पहुँचबाट पनि सर्वसाधारण विमुख बनेका छन् । तापक्रम माइनसमा झरेपछि सडकमा गाडी चलाउन पनि कठिन भएको छ । सुपर मार्केटहरूमा मानिसको भीड लाग्न थालेको छ । केही राज्यहरूमा मंगलबार विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् ।
चिसो मौसम र तीव्र हावाले मागअनुसार बिजुली आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको हो । माइनस १८ डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेको टेक्सासमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने टर्बाइनहरू जमेका छन् । ग्यास फायर पावर प्लान्टले पनि काम गर्न छोडेका छन् ।
हिमआँधीको असर छिमेकी मेक्सिकोमा पनि देखिएको छ । त्यहाँका विभिन्न राज्यहरूमा पनि विद्युत सेवा अवरूद्ध भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रभावित राज्यहरूमा आपतकालीन सहयोग गर्न आफ्नो प्रशासन तयार रहेको बताएका छन् । उनले टेक्सासमा आपतकालको घोषणा गरेका छन् ।
‘बिग बोस सिजन –१४’ को विजेता बनिन् रुबीना दिलैक
म्यानमारमा सैनिक शासनका कारण तनाव बढ्दै गएपछि , नागरिकहरू रातभर गस्तीमा
५४ यात्रु बोकेको बस नहरमा खस्यो, ३० जनाको शव निकालियो
दूध बेच्नको लागि यी किसानले खरिद गरे हेलिकप्टर!
२३ वर्षमा ११ बच्चाकी आमा बनिन् क्रिस्टिना, १०५ बच्चाको लक्ष्य !
इक्वेडरका जेलमा झडप हुँदा ७५ जनाको मृत्यु
विश्‍वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट स्टेडियमको नाम नरेन्द्र मोदी राखियो
पाकिस्तानी सांसदले १४ वर्षीया स्कुले बालिकासँग बिहे गरे